Mozika mafana : Hitondra « bômba be » etsy Analakely i Tence Mena -
AccueilVaovao SamihafaMozika mafana : Hitondra « bômba be » etsy Analakely i Tence Mena
Mpanakanto fantatra amin’ny fihetsika mahery vaika. Rehefa ela tsy tazana tamin’ny fampisehoana teto an-toerana, hivoaka amin’ny fahanginany ary hitondra avy hatrany ny “Bômba be” etsy amin’ny Le Glacier Analakely i Tence Mena, ary manome fotoana ireo mpankafy azy ny zoma 10 Marsa ho avy izao manomboka amin’ny 9 ora alina. “Io no hisantarana ny bômba be tour izay hitetezana faritra maro eto Madagasikara taorian’ny fotoana maro tsy nihaonana”, araka ny fanazavana nentin’i Tence Mena. Toa ny mahazatra azy, ho entiny amin’ny fampisehoana voalohany eto an-drenivohitra tamin’ity taona ity ireo hira efa nampalaza azy hatramin’izay toa ny “samy mahery”; “A fond la volume”, “Baly mipoapoaka”, “samy mahery”… Ho entiny hampangotraka ny fiarahana ihany koa anefa ireo hira vaovao ary ao anatin’izany ny “Bômba be”, hira vaovao entina hamalifaliana ny mpankafy, ny “Manangy am caisse”…
Na dia fantatra amin’ireo mozika mafana aza dia manana ireo mozika milamindamina miresaka fitiavana ihany koa i Tence Mena ary anisan’ny ho entiny amin’io fampisehoana io ny hira vaovao “Agnao no tena izy”. “Mbola ho maro ny tolotra tsy ampoizina mandritra ny fampisehoana sy mandritra ny taona fa ho hitantsika eo ihany”, hoy ihany ity mpanakanto ity.
Ity indray no fihaonana ataon’i Tence Mena amin’ny mpankafy eto an-toerana taorian’ny fotoana maromaro nitrandrahana ny sehatra iraisam-pirenena ka nitetezany firenena maro ka anisan’izany ny tany Côte-d’Ivoire.
Taorian’ny savorovoro niseho tany Vangaindrano ny alatsinainy lasa teo, dia mbola nitohy ny fanehoan’ireo vahoaka any an-toerana ny hatezerany. Rehefa tsy namaly ny fitakiana nataon’izy ireo mantsy ny zandary ao Vangaindrano dia niroso tamin’ny fametrahana ...Tohiny